Indonesia - BBC News Somali
Posted at 15:18 11 Agoosto 202115:18 11 Agoosto 2021
Xanaaq ka dhashay diblomaasi si xun loogu bahdliyay dal kale
Xukuumadda Nigeria ayaa falkaas ku tilmaantay "fal dembiyeed caalami ah oo aad u foolxun oo uu ku kacay qaranka Indonesia".
Posted at 2:57 5 Abriil 20212:57 5 Abriil 2021
Mahiigaanno lagu le'day oo Indonesia ka da'ay
Ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay daadad soo rogmaday iyo dhulka oo meelo go'ay dalalka Indonesia iyo Timor Leste maalintii Axaddii.
Posted at 1:31 6 Febraayo 20211:31 6 Febraayo 2021
Ka dib markii uu bulshada aad ugu dhex faafay muuqaal muujinaya ardayad Masiixiyad ah oo lagu dirqiyayo in ay fasalka ku dhax xidhato khimaar, ayaa Indonesia dugsiyada dawladda ka mamnuucday in labiska diimeed lagu khasbo ardayda.
Posted at 13:15 6 Jannaayo 202113:15 6 Jannaayo 2021
Waddan go'aan ka gaaraya in tallaalka Covid-19 uu xalaal yahay iyo in kale
Culimada mid ka mid ah waddamada Muslimiinta ayaa hubinaya in tallaalka Covid-19 uu waafaqsan yahay shareecada Islaamka.
Posted at 4:11 10 Sebtembar 20204:11 10 Sebtembar 2020
Posted at 13:21 21 Luulyo 202013:21 21 Luulyo 2020
Jasiirad dumarka la afduubo si loo guursado: "Waxaan dareemay in aan dhimanayo"
Gabdhaha la afduubto si loo guursado waa dhaqan muran ka dhaliyay dalka Indonesia, iyadoo dowladda ay dooneyso in arrintaas la soo afjaro.
Posted at 10:24 6 Maajo 202010:24 6 Maajo 2020
Corona fayras: "Madaxweynaha oo TV kaga dhawaaqay in aan qabo Covid-19 ayaan daawaday"
Sita Tyasutami waxay ka sheekeneysaa astaamaha cudurka corona, inkasta oo ay jiifto isbitaal ku yaalla caasimadda Indonesia ee Jakarta, welina lama ogaan xaaladdeeda caafimaad, Iayada iyo hooyadeed Maria waxaa la seexiyay hal isbitaal, lamana ogaan cudurka ku dhacay.
Posted at 18:02 13 Abriil 202018:02 13 Abriil 2020
'Xaaskeyga waxay dhimatay ayadoo sameyneyso wixii ay jecleyd’
Shaqaalaha caafimaadka ee safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah coronavirus waxay ku khasban yihiin inay si iskood ah u iibsadaan dharka iyo qalabka ay isaga difaacayaan cudurka. Dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal da'dooda ay tahay dhowr iyo 30 sano ayaa ka mid ah dadka coronavirus ugu geeriyooday dalka Indonesia.
Posted at 6:34 11 Maarso 20206:34 11 Maarso 2020
"Waxaan helay wiilkeygii aan muddo u heystay inuu dhintay"
Posted at 4:47 9 Maarso 20204:47 9 Maarso 2020